Ifotoxx, fakela lo mhleli wesithombe kunye nomphathi ku-Ubuntu 20.04 | Ubunlog
UDamien A. | 20/06/2021 14:14 | Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kumhleli weFotoxx. Le yinkqubo yasimahla, evulekileyo yokuhlela imifanekiso esisiseko. Imalunga ne Isicelo se-GTK esinokuthi siququzelele kwaye silawule ingqokelela enkulu yemifanekiso, yokwandisa iifoto kunye nokwenza imisebenzi yebhetshi. Iya kusivumela ukuba singenise imifanekiso yeRAW kwaye senze konke ukwenziwa kwezi.
Ukuba ujonga ukuhlela okulula kunye nokulawulwa kwesicelo seGnu / Linux, Ifotoxx sisoftware yasimahla nevulekileyo yokukhetha ekhawulezayo kwaye kufanelekile ukuzama. Injongo yale nkqubo kukuhlangabezana neemfuno zabafoti abaqeqeshiweyo kunye nabadlali. Ngaphandle kwazo zonke iindlela ezinikezelayo, ezi azenzi ukuba ziyeke ukukhawuleza kwaye zinokukukhupha enkathazweni.
Ifotoxx iyahambelana nemigangatho kwaye inokusetyenziswa nezinye iinkqubo zokufota. Le nkqubo kulula ukuyisebenzisa, kodwa ayiqhelekanga. Ngesi sizathu inika umdla funda isikhokelo somsebenzisi ngaphambi kokuba uqale ukuyisebenzisa. Iifotoxx zipakishwe ziimpawu, ke musa ukulindela ukuyazi kakuhle kwimizuzu nje embalwa.
1 Iimpawu ngokubanzi zeFotoxx
2 Faka iFotoxx kwi-Ubuntu 20.04 ngePPA
Iimpawu ngokubanzi zeFotoxx
Inkqubo yile ifumaneka ngesiNgesi.
Ngaphakathi izakuvumela ukuba uququzelele kwaye ulawule ingqokelela yemifanekiso / yemifanekiso emikhulu kakhulu.
Ngokungafaniyo nabanye abahleli bemifanekiso, oku inazo zonke iimenyu zayo kwiqela lasekhohlo elinamandla okutshintsha umbono wefayile kunye nokuhlela iifoto.
Siza kufumana ziyafumaneka iseti etyebileyo yokuhlela kunye nokusebenza kwakhona.
Singakhangela ingqokelela yemifanekiso, sisebenzisa isikhombisi esincinci kwaye ucofa umfanekiso ukuwujonga okanye ukuwuhlela.
Ukuguqulwa kweqela, ukuguqulwa kweRAW. Singangenisa iifayile zeRAW kwaye sizihlele ngemibala enzulu.
Enye into enokwenzeka ukuba le nkqubo iya kusinika iya kuba gcina imifanekiso ehlaziyiweyo njengeJPEG, PNG (8/16 bit / color) okanye TIFF (8/16).
Iya kusinika ithuba lokukhetha into okanye indawo ngaphakathi komfanekiso (Zoba simahla, landela imiphetho, tshatisa amathoni ezikhukhula), Faka isicelo hlela imisebenzi, ikopi kwaye uncamathisele, ubungakanani kwakhona, ukudibanisa, i-warp, njl. unganxibanga maleko. Sinokuphambanisa, silole okanye sisuse ingxolo, silungelelanise umbala, njl.
Inkqubo iya kusivumela hlela imethadatha yomfanekiso (iithegi, iigeotags, imihla, ukulinganiswa, izihlokwana ...).
Iya kusinika ithuba lokukhetha khangela imifanekiso usebenzisa nayiphi na indibaniselwano yemethadatha, amagama efayile, iifolda, okanye amagama athile.
Ifotoxx isebenzisa iifayile zethu zemifanekiso apho bakhoyo kunye igcina isalathiso esahlukileyo sokukhangela ngokukhawuleza.
Siza kufumana ezinye iziphumo ziyafumaneka ukufaka kwimifanekiso.
Iya kusivumela nathiyiya usebenzisa i-GIMP, Rawtherapee, njl. njengezincedisi.
Ezi zezinye zeempawu zenkqubo. Zonke zinokubonisiswa ngokweenkcukacha iwebhusayithi yeprojekthi.
Faka iFotoxx kwi-Ubuntu 20.04 ngePPA
Ukuba unomdla wokufaka ingxelo yokugqibela epapashwe kwiFotoxx, abasebenzisi be-Ubuntu banako Sebenzisa iPPA ehambelana noBuntu 20.04, iLinux Mint 20 kunye no-Ubuntu 21.04. Siya kufuna kuphela ukuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye senze lo myalelo ulandelayo ku yongeza iPPA kwinkqubo yethu:
Nje ukuba uluhlu lwesoftware lufumaneke kwindawo yokugcina ekhompyuter yethu luhlaziyiwe, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukumilisela lo myalelo fakela le software yokulawula ifoto:
Xa ukufakela kugqityiwe sinakho fumana isiqalisi senkqubo kwikhompyuter yethu ukuqala ukuyisebenzisa.
Kwimeko apho ukhetha Sebenzisa le nkqubo njengefayile yeAppImage, le nto inokukhutshelwa kwi- Iphepha lokukhuphela iprojekthi.
Ukususa i-PPA ku-Ubuntu, kuya kufuneka wenze njalo yiya kwi-Software & Updates usetyenziso, kwaye ukhethe kuyo enye ithebhu yesoftware. Apho siyakufuna kuphela ukumakisha umgca wokugcina kunye nokucima ngokucinezela iqhosha elithi «Susa».
Ukuphelisa i-PPA, sinokuvula kwakhona i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye usebenzise lo myalelo:
Ngoku sinako khipha iFotoxx. Ukugqibezela (Ctrl + Alt + T) kufuneka senze umthetho:
Ukuba ujonga into elula, ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kwamathuba amaninzi njengoko inakho GIMP, ungathanda ukuzama umhleli weFotoxx.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Ifotoxx, faka lo mhleli wesithombe kunye nomphathi wokuqokelela kwi-Ubuntu 20.04